Global Voices teny Malagasy » Hetsika fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, sary fanehoana “amina endrika tsy tena izy” ataon’ny mpanakanto iray ao Hong Kong an’izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Hetsika fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, sary fanehoana “amina endrika tsy tena izy” ataon'ny mpanakanto iray ao Hong Kong an'izany
Voadika ny 17 Novambra 2019 4:57 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fanoherana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Surrealhk: Naoty an-taratasy miloko marevaka araikitra manenika ny tanàna… ara-bakiteny. Manohana indrindra indrindra an'ireo hetsika sy mampiseho ny hatezerany amin'ny governemantan'i Hong Kong. Avy amin'ny Facebook Surrealhk, nahazoana alàlana. 
Ny Rindrina Lennon  ao Honk Gong no asa ara-javakanto niombonana izay naka ny anarany avy amin'ny rindrina voalohany  noforonina tao Prague, taorian'ny nahafatesan'ny mpihira John Lennon. Niseho voalohany ny dika rindrina raritakelaka (mosaïque) nataon'i Hong Kong nandritra ny Hetsika Elobe tamin'ny taona 2014  rehefa nalefan'ireo mpanohitra ny sarin'ireo naoty an-taratasy miloko marevaka miraikitra miaraka amin'ireo hafatra fanohanana teo amin'ny tohatra miakatra mankao amin'ireo Biraon'ny Governemanta Foibe. Nandritra an'ireo hetsiky ny taona 2019 fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, namboarina indray ilay rindrina ary nipoitra nanerana ny Nosy ireo rindrina Lennon hafa.
Ny sary navoaka etsy ambony, mampiseho ny endrika ivelan'ny foibentoeran'ny governemantan'i Hong Kong rakotra an'ireo naoty amin'ny taratasy araikitra, dia vao haingana no nanjary nalaza teny anatin'ireo media sosialy tao Hong Kong. Ny artista voalohany nipoiran'ny sary dia Tommy Fung, mpaka sary sy mpanao sary, izay namorona ny kaonty media sosialy Surreal Hong Kong  mba hanehoana hevitra mikasika ny fiainana ao Hong Kong.
Tamin'ny tafatafa an-telefona niarahana tamin'ny Global Voices, nambaran'i Fung fa nifindra monina tany Venezoelà izy fony mbola kely ary niverina tao Hong Kong indray ny taona 2016 rehefa nihasarotra ny tontolo politika sy toe-karena tao Venezoelà.
Natombony ho sahala amin'ny fialamboly manokana ho azy ny tetikasa Surreal Hong Kong tamin'ny taona 2016, saingy nahasarika an'ireo dokambarotra sy ireo fitadiavana asa maro ilay kaonty media sosialy, ka nanjary lasa loharanom-bola ho an'i Fung. Nanazava ny antony nampiasàny ny ““Surreal Hong Kong”” ho toy ny lohahevitra amin'ny asany ilay artista:
.Fony voalohany niverina tao Hong Kong aho, sahala amin'ny toa tsy tena izy avokoa ny rehetra tamiko: mitohy miasa tsy misy fitsaharana ireo olona eto, haingana daholo ny fihetsehan'ny zava-drehetra. Miverina any Venezoelà, tena nahantra ny toekarena ary tsy marintoerana mihitsy ny tontolo politika, saingy toa sambatra ny vahoaka. Fa ao Hong Kong, manankarena be sy milamina ny tanàna, tsy sambatra ny vahoaka ary tsy mahazaka somonga. Ny tetikasa dia vokatry ny fikarohana nataoko mikasika ny tanàna. Miaraka amin'izay, tiako ny hankalaza ny dikan'ny ‘surréaliste’ (tsy tena izy, ankosotra) izay manohana ny tena izy iainantsika.
Nampitahainy tamin'ny asan'ireo olona hafa ny fomba fanamboarany ny endriky ny sary navoakany:
Ny ankabeazan'ireo sary namboarina (photoshopped) mandehandeha any anaty tambajotra dia tena feno resaka politika loatra. Tena matetika izy ireo no maneso sy mandrabiraby ny toe-draharaha politika. Ny politika no ivon'ny asa raha toa eo amin'ny toerana faharoa ny endrika ara-javakanto. Raha ny tontolo tena misy kosa no aingampanahy nanosika ireo asako ary mandrakotra ny endri-piainana isankarazany ao Hong Kong miaraka amina fijery miabo kokoa
“Tsy olana izay lokony, aorian'ireo efitra malala notsinjarainara ho efitrano madinika, goba bitika kely matroka fotsiny izy ireo araka izay antsoin'ny olona sasany hoe ny ‘any aminy’ ” Avy amin'ny Facebook Surrealhk. Nampiasaina nahazoana alalàna. avy amin'ny Facebook Surrealhk. Nahazoana alàlana. 
Fa tsy hoe tsy manao politika akory ilay artista. Manana hafatra matanjaka ara-tsosialy sy ara-politika ireo ampahany roa tena ankafiziny. Ny sary nokiraina avy amin'ny Choi Hung Estate no safidiny voalohany:
Lasa toerana fanaovana fizahantany malaza ny Choi Hung Estate mba hakàna sary noho ny lokony isankarazany mampiavaka azy. Novaiko ny sary mba fitaratry ny olana mikasika ny fonenana ao Hong Kong – hoe manjary kely dia kely ireo efitrano fonenana satria tsy voaara-maso ny tsenan'ny fananan-trano.
Ny foibentoeran'ny governemanta no asa ankafiziny indrindra, Lennon Wall (sary asongadina eto). Ireo arabe no nandrian'ny fony. Tsy maintsy maka 20 ora ilay artista mba hikirakiràna ny sary, satria nalaina avy amina sary iray tena izy ireo taratasy araikitra (post-it) tsirairay amin'ny sary teny amin'ireo Rindrina Lennon tany anatin'ireo faritra isan-karazany.
Tena mazava ny hafatra avy amin'ito asa ito, mendrika ny ho renesina avokoa ny feo rehetra.
Hatramin'ny Jona, nandray anjara no sady naka sary tamin'ireo hetsika fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka i Tommy. Ho fanampin'ny Rindrina Lennon, nampitaha an'ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ireo tena maherifo indrindra ny asany, nampitaha ny fahefan'ny fanoherana amin'ny Dragon Ball Z ary nampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana ho toy ny mitolona amin'i Gozilla.
“Mitsangàna ary akaro ny feonareo!” Isika miaraka no matanjaka indrindra tsy araka izay noeritretinao!” Avy amin'ny Faceb Surrealhk Facebook. Nahazoana alàlana. 
“Tsy ilainao akory ny hery miafina mba ho lasa maherifo!” Avy amin'ny Facebook Surrealhk. Nahazoana alàlana. 
“Isika no fahazavana ao anaty fahamaizinana… eny, isika sy Goku!” Avy amin'ny Facebook Surrealhk. Nahazoana alàlana. 
Tena tsy toy ny tena izy mihitsy ireo hetsipanoherana ary io no namporisika ahy hampiseho sy hankalaza an'ireo hafatra. Fantatro fa tena rera-tsaina be ireo mpanohitra ary manantena fa hitondra hery miabo ao anatin'ny hetsika ireo asako. Ohatra, rehefa mahita ireo jiro eny amin'ny findain'ireo mpanao fihetsiketsehana aho, afaka avondrona ho hery matanjaka be iray sahala amin'ny Dragon Ball Z ireo teboka kely.
Tsy nafenin'ilay artista ny hasosorany manoloana ny governemantan'i Hong Kong.
Tena manantena aho fa afaka hiasa mafy izy ireo mba hanatsaràna an'i Hong Kong ary hitandro ny tombontsoan'ireo vahoaka ao Hong Kong ho fototra iray amin'ny fitantanan'izy ireo.
Rehefa nanontaniana azy raha manan-kolazaina izy ho an'ireo mpanjohy ny Global Voices, namaly tamina fehezanteny iray manohana an'i Hong Kong i Fung sy tamin'ny iray tamin'ireo teny filamatra tena malaza indrindra tao anatin'ireo fihetsitsehana manohitra ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, manao hoe: Mandranitra  i Hong Kong!
Mba hamakiana misimisy kokoa mikasika ny fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka ao Hong Kong, tsidiho ny pejy manokana an'ny Global Voices .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/17/142433/
 Avy amin'ny Facebook Surrealhk, nahazoana alàlana.: https://www.instagram.com/surrealhk/?hl=en
 Rindrina Lennon: https://en.wikipedia.org/wiki/Lennon_Wall_(Hong_Kong)
 rindrina voalohany: https://en.wikipedia.org/wiki/Lennon_Wall
 Hetsika Elobe tamin'ny taona 2014: https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_the_Umbrella_Movement
 pejy manokana an'ny Global Voices: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-people-of-hong-kong-vs-the-china-extradition-bill/